Ikolishi elinomlando iLemana seliphenduke isidleke sabaphangi | Scrolla Izindaba
Ikolishi elinomlando iLemana seliphenduke isidleke sabaphangi
Ikolishi elise-Elim ngaphandle kwase-Makhado e-Limpopo i-Lemana selikhiqize abantu abaningi abahlonishwayo emlandweni walo weminyaka engu-112.
Phakathi kwalabo ababefunda kulo kubalwa umholi wama-Tsonga ongasekho uSolwazi Hudson Ntsanwisi, kanye no-Eduardo Mondlane, ongumsunguli we-Frelimo e-Mozambique, nabanye abaningi.
Kodwa namuhla, leli kolishi elinomlando selishintshile laphenduka isidleke sabaphangi.
Isakhamuzi sasendaweni uMashudu Ndlovu uthe “Esikubonayo izigebengu ezizisebenzisa leli kolishi njengendawo yokucasha nokugcina izinto ezebiwe futhi zigebenga nabahlali”.
“Okubi kakhulu ukuthi abanye abenzi bobubi bayaziwa kodwa abantu bayesaba ukubhekana nabo.”
Ngonyaka odlule leli kolishi laba sematheni ngesikhathi onogada abasebenza khona bevala amasango, okwaphoqa ukuthi abafundi ababefunda kulesi sikhungo bafune indawo yokukhosela ezikoleni eziseduze.
Inkampani yonogada okukhulunywa ngayo ibizama ukuthola ukunakwa uhulumeni ngemuva kokuthi kuphele izinyanga ezingu-15 bengaholi.
Uma ungena kule ndawo uhlangatshezwa amafasitela aphukile, amafreyimu eminyango ephukile, uphahla olugudluliwe, impahla yasendlini entshonstshiwe nezinto zasekhishini.
Leli kolishi selidicileke phansi ngendlela yokuthi lokhu sekukhathaza abahlali bendawo abanomuzwa wokuthi akwanele okwenziwayo ukuvikela leli kolishi.
Ilungu lomphakathi elikhathazekile lazise i-Scrolla.Africa ngalesi simo.
“Lokhu kubi kakhulu, ikakhulukazi uma kwenziwa ngabantu bendawo abawaziyo umlando waleli kolishi. Leli ifa lethu futhi alikho elinye ikolishi lase-Vhembe elifake isandla ngokulinganayo ngendlela okwenze leli kolishi,” esho.
“Baningi abaholi abakhuliswe lapha futhi sibona sengathi leli kolishi lingabamba iqhaza ekuthuthukisweni kwezwe lonke.”
Lo wesilisa uthe bajabula kakhulu ngenkathi lilungiswa ngo-Mbasa 2019. Kodwa ithemba labo lashabalala ngesikhathi kuma yonke into futhi abantu bendawo sebeqala ukuntshontsha izinto ebhilidini.
“Uhulumeni angakwazi ukukuguqula le ndawo ayenze kube i-TVET college yase-Vhembe, bangasebenzisa amahhovisi futhi bonge imali yokuqasha,” kusho uMashudu.
Okhulumela uMnyango wezeMisebenzi yoMphakathi e-Limpopo, uTendani Munyai, uthe ezokuphepha ziphazamisekile ngenxa yokungaboni ngasolinye nosonkontileka owamisa inkontileka yakhe.
“Usonkontileka omusha kule ndawo uzizwe engaphephile wahamba ngenxa yokusabela izimpilo zabasebenzi bakhe. Sixoxisana nosonkontileka ozobuyela kuleli lokishi maduze,” esho.